Ahoana kay ny fahitanareo an-dRavalomanana | Forums malgaches - KoolSaina.com
Ahoana kay ny fahitanareo an-dRavalomanana
Accueil › Forums › Politique et actualité › Ahoana kay ny fahitanareo an-dRavalomanana
19/07/2010 à 12 h 06 min #22211
tsy nitandrina nahatoky tena be loatra
manenina hono ary te hody
fa naninona no nandeha?
11/07/2011 à 12 h 53 min #22620
Tsy dia tena ratsy loatra ny nataon-dra8 saingy heveriny ho tahaka ny mitondra orinasa ihany no fitondra fitondra firenena. Ny orinasa mantsy dia ilàna fahaiza-mitantana ; fa raha firenena kosa dia tsy maintsy ampiana fahaizana manao politika ny fahaiza-mitantana (Gestion), omban’ny fahaiza-mitondra (Management) ary indrindra ny fahaiza-mitarika (Leadership). Ny Leadership izay mba tonontononony matetika amin’ny kabariny fa tsy hainy natao pratique.
Fa ny mpitondra ihany koa dia tsy mahazo misabaka e! Rehefa mivavaka dia tena ataovy amin’ny fo, fa momba anao sy ny vahoakanao Andriamanitra, fa raha mivavaka sadasada ianao ka mampifandrafy an’Andriamanitra amin’ny sampy dia Izy ihany no mampiasa ny vahoakany hanaisotra anao eo. Tahaka izany no nihatra tamin’ireo mpanjaka nifandimby tany Isiraely.
Ny fiverenany aloha dia sarotra inoana, saingy ny zava-bitany koa tsy azo adinoina.
21/07/2011 à 13 h 02 min #22630
tahaka ny olombelona rehetra ihany no fahitana azy ,saingy tadidio fa nisy nandahatra izao tontolo izao ary tsy azo idifiana rehefa voatendry noho izany ny omaly hibanjinana ny ho avy dieny ankehitriny ary soa lavo ahay hitsako soa kenda ahay mamindra ,ary ny ampangoro tsy in-droa manitra noho izany amboary ny saina ho valalabe mandry